कतै उल्टने त हैन ?” – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:04:55
जापानी समय : 06:19:55
Tag: कतै उल्टने त हैन ?”
प्रचण्डको डर- “संघीयता २२ से २४ से जस्तो हुन लाग्यो, कतै उल्टने त हैन ?”
Posted on August 8, 2018 August 8, 2018 by Yadav Devkota
नेपालमा नयाँ अभ्यास हुँदैगएको संघीयतामा तहतहको करले गर्दा अढाई सय वर्षअगाडिको २२ से २४ से राज्यको झल्को दिएको भन्दै यसले कतै व्यवस्था नै उल्टने त हैन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
मंगलबार औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तहपिच्छेको करले गर्दा प्रदेशपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले संघीयता नै उल्ट्याउने कारण बन्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले नेपाल एकीकरणमा जनताले साथ दिएको पनि राज्यपिच्छेको करले वाक्क भएर हो भन्ने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत सुनाउनुभयो ।
प्रचण्डको तर्क थियो कि- “त्यतिबेला तनहुँ गयो कर तिर्‍यो, गोरखा आयो कर तिर्‍यो, भीरकोट गयो कर तिर्‍यो, काठमाण्डू आयो कर तिर्‍यो, ललितपुर आयो कर तिर्‍यो, मकवानपुर गयो कर तिर्‍यो । यसले गर्दा त्यतिबेलाका व्यापारीहरूलाई तनावै तनाव भयो । मानिसहरू वाक्क भए, यी ठाउँठाउँका राजा र सरकार कति हुन् कति भन्या जस्तो । त्यो भन्दा बरु एउटै सरकार बलियो भइदियो भने एकै ठाउँमा तिर्न पाइन्थ्यो” भन्ने कारणले नै पृथ्वीनारायण शाह सफल भए भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
यस्तै निष्कर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको थियो । महासंघको यस्तै गुनासोपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उपरोक्त धारणा राख्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा उहाँले उद्योगी व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा नयाँ कर लगाइएको भन्दै गुनासो गरेपछि उनले सरकार र पार्टीको नियत त्यस्तो नभएको भन्दै बचाउ गर्दै स्थानीय तहहरूले भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार र दायित्व पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्ने गरेका छन् भन्दै उम्कने प्रयास गर्नुभयो ।
वीरगञ्जमा उद्योगी व्यापारीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्न वीरगन्ज पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँ धेरैले दोहोरो र तेहेरो कर लाग्न थालेका भन्दै गुनासो गरेका थिए।
उद्योगी व्यवसायीले छरछिमेकका देशमा एकीकृत कर प्रणाली अपनाइने गरेकोमा नेपालमा विकेन्द्रित र थरीथरी कर लाग्न थालेकोमा व्यवसायीहरूले त्यसले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने बताएपछि प्रचण्डले त्यस्तो अचेल आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँको तर्क थियो, अझ करकै कारण कतै राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा हुने हो कि भन्दै उहाँले अहिले हामीले बनाएको स्थानीय र प्रादेशिक सरकार भनेका बाइसे चौबीसे सरकार त होइन । हामीले झन् जनताको घरदैलोमा सीधै सरकार र सेवा प्रदान गर्ने भनेर बनाएको हो । तर मलाई चिन्ता के छ भने अब करको जे कुरा हुन थालेको छ त्यो कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन ?
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीहरू प्रचण्डले सङ्केत गरे जस्तै तनावमा परिसकेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो “अहिले नेपालमा व्यवसायीहरू करका कारणले एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ । तीनवटा तहका सरकार छन् । अनि कर बढिरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि जथाभावी कर लगाइरहेका छन्” ।
चुनावपश्चात् गठित ७५३ स्थानीय तह तथा सात वटा प्रदेशलाई संविधानले नै कतिपय विषयमा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तिनै अधिकार र दायित्व मात्र आफूहरूले बहन गर्न खोजेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।
Posted in राजनीतिTagged कतै उल्टने त हैन ?", प्रचण्डको डर- "संघीयता २२ से २४ से जस्तो हुन लाग्यो